सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित! | suryakhabar.com
Home कृषि सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित!
on: १९ मंसिर २०७४, मंगलवार १८:५० In: कृषिTags: No Comments
पाल्पा । यस वर्ष जिल्लामा सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । फूल फुल्ने समयमा असिना पर्नु र विभिन्न किसिमका रोगको आक्रमणले सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान मर्कामा परेका हुन् ।
१९ मंसिर २०७४, मंगलवार १८:५०